ह्युब्रिस्, कमिनिस्ट र मेटामोर्फोसिस् | Sajhakhabar ह्युब्रिस्, कमिनिस्ट र मेटामोर्फोसिस् | Sajhakhabar
त्यही बेला नेकपाका उच्च नेता प्रचण्डले पुस १३ गते राति कान्तिपुर टीभीको ‘फायरसाइड’मा पत्रकार रूपेश श्रेष्ठसँग गरेको अन्तर्वार्ता आयो । मेरानिम्ति केपी ओलीले संसद् भङ्ग गरेको कुरा र प्रचण्डको व्याख्या दुवैले प्रश्नहरू उजागर गरिदिए । नेपाली परिवर्तनशील राजनीति कसरी काम गर्दै थियो र अब कतातिर जान्छ ? के यो विनिर्माणतिर अभिमुख छ ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू एकैसाथ आए । राजनीतिक विश्लेषक नभएको हुनाले म साहित्यिक आधारहरूद्वारा नै अर्थहरूको खोजी गर्ने जमर्को गर्छु । ओलीको चाहिँ तथाकथित ‘याक्सन्’ हो ।
प्रचण्ड उन्मुक्त र आत्मस्वीकृतिमूलक भाषा बोल्ने अवसर प्रयोग गर्दै थिए । ती संसद् भङ्ग भएपछि फुटेको नेकपाको तर्फबाट बोल्दै थिए । तिनले आफ्नो, केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, बादल र अरू केही नेताका चरित्र र तिनका मनोगत आयामको खुलासा गरेका थिए । मूलतः त्यो अन्तर्वार्तामा हाम्रोजस्तै साहित्यिक शैली खोज्दै थिए ती । आफ्नो स्वभावबारे व्याख्या गर्दै थिए । रूपेश भाइको प्रश्नको उत्तर दिँदै तिनले भने— म अस्थिर होइन, म जमेर नबस्ने मानिस हुँ । मैले ‘ब’ मित्रहरू (वैद्य, बाबुराम, बादल, वामदेव आदि) लाई खेदेको होइन । उनीहरू आफ्ना अर्कै कार्यक्रम र धारणा लिएर गएका हुन् ।
सायद प्रचण्ड भन्दै थिए– इतिहासका आँधीमा साथीहरू उनको वरिपरि उठेका थिए अनि ती सँगै हिँडिरहेका थिए । म साथीहरू लिएर आएको छु, आएको पुल भत्कियो, जाने ठाउँ छैन भन्दै ती बृहत् वामवृत्तमा आइपुग्दा मैले उनलाई बाइबलका मोजेज् फ्लक लिएर निस्केको तुलना गरेर यही अखबारमा लेख लेखेको थिएँ । तर, नेकपाको राजनीतक घटनाक्रममा तिनको र तिनका साथीहरूको त्यो महायात्राले के पाठ खेल्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ । तिनले भने– बद्लिनु राजनीति र राजनीतिज्ञका निम्ति नयाँ शक्ति खोज्नु र त्यसको सञ्चार गर्नु हो । प्रचण्डले गुनासो गरेको अर्थपूर्ण थियो– अहिले अमेरिका अनि प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भएका, भारत, बेलायत फ्रान्स आदि देशले यो संसद् भङ्ग भएको विषयमा कुनै आलोचना गरेनन् । रूपेशले सोधे— चीनले के गर्छ ? प्रचण्डले भने— चीनले यस्ता कुराको आलोचना गर्दैन । अर्थपूर्ण लाग्यो ।
हिजोदेखिका ती पार्टीभित्रका लुप्त कुराहरू बाहिर बहसमा आएका छन् । कांग्रेसका केही नेताले सबै फरक विचार मुल्तबी राखेर एक हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएका छन् । नेपाली राजनीति विश्लेषण गर्ने दलहरूको यो चिन्ताजनक अवस्थालाई ‘के सक्यो दैलो देख्यो’ भन्ने उक्तिमा चरितार्थ गर्न सकिन्छ । अहिले हामीलाई अस्तित्ववादी उपन्यासकार झँ पोल सार्त्रको युद्धकालको उपन्यास ‘आत्मामा फलाम’ को पात्र मेथ्युज्को जस्तो विश्वास गर्ने वा देखिने एउटा दृष्टि दिइएको छ ।
मेथ्यु त्यसैमा विश्वास गरेर विसंगत जीवनसँग लडिरहन्छ । तर, खासमा अगोचर तह छ, जुन ऊ आकलन गर्न सक्दैन । हामीलाई दिएको तह मेथ्युको जस्तो ओली र दाहाल समूहको राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता हो । अर्को अगोचर तहका इन्डोप्यासिफिक र रोड एन्ड बेल्टका अन्तरंग शीतयुद्ध आदि अनेकौं कुरा लिएर खेलिने खेलहरूबारे हामीलाई थाहा हुँदैन । प्रचण्डले यो कुरा हो भने ‘फायरससाइड’ मा । फ्रान्ज काफ्काको प्रसिद्ध कथा कायापलट वा ‘मेटामोर्फोसिस’जस्तो परिवर्तन भएका छन् कमिनिस्ट नेताहरू अहिले, थाहा हुँदै छ ।
त्यसैले संसद् भङ्ग हुनु अशुभ संकेत हो । यो कुराको चेतना भएको राजनीति मात्र लोकतान्त्रिक हो । प्रधानमन्त्रीले संविधान भंग गरको विरोधमा सडकमा आवाजहरू उठिरहेका छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको बहस सुरु भएको छ । विदेशी सरकारी दूतहरू र दलका नेताहरू सक्रिय छन् । यो अनपेक्षित घटना र अशान्तिको कारण संसद् भङ्ग हुनु नै हो । तर, यहाँसम्म आइपुग्नुको कारणमा नेकपाका र अरू दलका नेताहरूका स्वभावदोष र आत्मकेन्द्रित शक्ति अनि धनमा लिप्त कर्महरू जिम्मेदार छैनन् भन्न सकिँदैन । (इकान्तिपुर अनलाइन)